AFRIKANINA MPIVAROTRA RONGONY
Teratany afrikana roa no nosamborina tetsy Faravohitra noho ny fanaovana trafikan-drongony avo lenta na « drogues dures ».
Nisy vehivavy malagasy roa izay niaraka tamin’izy ireo ary nosamborina ihany koa. Tao anaty hotely ireto olona ireto no nosamborina ary mbola nahitàna cocaine niaraka tamin’izy ireo. Misy eto amintsika ny fivarotana ity karazan-drongony izay mampigadra mandram-pahafaty ny fidorohana azy any amin’ny firenena sasany izay sarotiny amin’io toa ny nosy Maorisy.
MPILOKA AN-DALAMBE NOSAMBORINA
Raikitra ny fisamborana faobe tetsy Isotry. Olona 19 no indray nalain’ny polisy ary nanokafana fanadihadiana tao amin’ny kaomisaria noho ny filokàna an-dalambe. Navotsotra ihany anefa rehefa avy nanaovana fanabeazana izy ireo toa ny hoe tena mampigadra ny filokàna an-dalambe. Nojerena tsirairay koa ny taratasin’ireo sao mba misy efa karohina na koa efa jiolahy ikoizana. Ny olona teo an-tanàna ihany no nanaitra ny sain’ny polisy satria manakorotana ireo mpiloka isan’andro ary koa miteraka tsy fandriam-pahalemana ny fisian’izy ireo.
HITOHY NY HAFANANA
Hitohy mandritry ny roa andro ny hafanana be eto an-drenivohitra sy eto amin’ny faritra sasany eto amin’ny nosy. Izay no vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro. Efa tafiakatra 33 dégré celcius ny teto Antananarivo omaly ka nampikaikaika ny olona. Mbola mety hiakatra izany mari-pàna izany ao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny tao anaty fiara, indrindra ny fiara iombonana dia tena sempotra tanteraka ny olona satria tafiakatra hatrany amin’ny 40 dégré ny hafanana kanefa mbola mihipoka ihany.
MIKOROTAN-TSAINA NY AO ANTSIRABE II
Mikorontan-tsaina ny mponina ao ambanivohitr’Antsirabe II noho ny fisian’ny fatin’olona iray izay hita ary efa taolana sisa. Vao haingana anefa izy no niala tao an-tranony ary dia io hita faty efa taolana tanteraka io sisa, toa ireny nesorina ireny mihitsy ny nofony raha araka ny fitantaran’ny mponina. Ny feo mandeha dia ny fisian’ny biby hafahafa izay mihinan’olona, tsaho izay mandeha haingana toa ny any amin’ny tontolo ambanivohitra rehetra ihany. Misy koa anefa ny manahy sao mba nangalàna taova ity lehilahy hita faty ity.
MPIGAFY ENY AMIN’NY DIGY
Misy andian’olona izay mandeha moto ka migafy mpandeha fiara indray eny amin’iny route digue iny rehefa alina. Efa misy fitoriana mipetraka ankehitriny eny anivon’ny polisy etsy Tsaralalàna, soa rahateo fa azon’ny mpitory avokoa ny sarin’ireo tanora izay nanakantsakana azy teny an-dàlana. Raha ny fihevitry ny mpitory dia ny haka ny fiara no tena tanjon’ireo olona ireo. Efa voadaroka hatramin’ny mpamily mantsy kanefa soa ihany fa mbola nahavita nitsoaka tamin’ny fiara io farany. Mila jeren’ny polisy akaiky ireto andian’olona hafahafa ireto.